Ahmad Abughaush, Jordaniana Nahazo Medaly Volamena, Ary Ny Famafàna ny Maha-Palestiniana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 31 Aogositra 2016 16:41 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Ελληνικά, русский, عربي, Español, English
Ahmad Abughaush manoroka ny medaly volamena azony ho an'i Jordania tamin'ny Taekwondo, lalao Olimpika Rio 2016 . Sary: Salem Khamis (CC BY – SA 4.0) avy amin'ny Wikimedia Commons
Avy amin'i Huda Ziade
Rehefa namihina ny medaly volamena voalohany azony ho an'i Jordania nandritra ny lalao Olaimpika vao vita tany Rio teo i Ahmad Abughaush, atleta mpanao haiady Taekwondo, dia nientan-kafaliana ho fankalazana ny fahombiazany sy ny famirapiratry ny zavabitany ireo Jordaniana sy Arabo, ary izao tontolo izao. Fa ny ankamaroan'ny Jordaniana-Palestiniana toa ahy, narahan'ny tsiro mangidy fara ilay fifaliana be tany am-boalohany. Maro aminay no tsy nahalala an'i Abughaush talohan'ny fandreseny, nefa ho an'ny Arabo dia tsy ilàna zavatra maro afa-tsy ny anaram-pianakaviany dia ahafahana mahalala ny tantarany. Rehefa dinihina tokoa, izay anaram-pianakavianay izay foana no itsarana anay.
Raha nizara momba ny fandresen'i Abughaush ny haino aman-jery Jordaniana sy iraisam-pirenena dia tsy niraharaha izay hanonona ny fiaviany hoe Palestiniana, na ny maha-zanaky ny mpitsoa-ponenana Palestiniana azy izy ireo. Tsapako fa famafàna mibaribary ny maha-Palestiniana an'i Abughaush izany, fa tsy dia nahataitra ahy loatra ny vokany, mandra-pahitako ny fomba nitateran'ny haino aman-jery Israeliana azy. “Niala ny toby ho any Jordania ny fianakaviany fotoana fohy taorian'ny nahaterahany, nefa maromaro amin'ireo fianakaviany no mbola mipetraka ao amin'ilay tanàn-dehibe, malaza amin'ireo tranony fihinanana Hummus”.
Niala ny toby
Ny tena marina dia noroahana tamin-kery tao an-tanàna noho ny antony roa ny fianakaviana Abughaush: voalohany, rehefa nandrava ny toeram-mpambolen'i Saeed ABugaush izy ireo tamin'ny Aprily 1948 ary avy eo indray, rehefa nitsoaka ny fianakaviana Abugaush niaraka tamin'ny fianakaviana Palestiniana an'arivony maro, taorian'ny vonomoka tao Deir Yassin, izay antsoin'ny Palestiniana hoe ‘Ny Nakbeh‘ (“loza mahatsiravina”). Ny taona maromaro nanaraka ny Nakbeh, rehefa nanandrana niverina tany amin'ny tanàna nahaterahany ny maro amin'ny fianakaviana Abugaush dia novonoin'ny tafika Israeliana toy ny “mpiditra an-tsokosoko”
Palestiniana mpitsoaponenana niala an'i Galilea nandritra ny fotoanan'ny Nakba tamin'ny 1948. Sary: sehatra hoan'ny vahoaka
Ao Jordania, somary hafa kely ny zava-mitranga, fa ny famafàna dia sahala. Ny Nakbeh tamin'ny taona 1948 dia nanery Palestiniana maro hifindra tany Jordania sy Amoron'i Jordàna, izay nozanahin'i Jordania taorian'ny ady. Nitranga izany rehefa nomena fizakàna zom-pirenena ho Jordaniana ny Palestiniana maro. Rehefa nobodoin'ny Israeliana ny tao Amoron'i Jordàna tamin'ny 1967; nisy andiana Palestiniana hafa voatery nandeha lavidavitra kokoa nankany Jordania.
Tamin'ny volana Jolay 1988; niala samirery tamin'ny fitakiany ny Amoron'i Jordàna i Jordania, fanapahan-kevitra izay nanokatra varavarana ho an'ny Fikambanam-Panafahana an'i Palestina mba ho lasa hany mpisolo tena ny vahoaka Palestiniana. Ho an'ny Jordaniana Palestiniana, midika izany fa ho lasa olona tsy manana tanindrazana tampoka izy ireo.
Lasa nofy ratsy ho an'ny Palestiniana monina ao amin'ny firenena ireo fitsidihana tsy maintsy nataon'ny Departemanta Jordaniana ho Fanaraha-maso sy Fisafoana. Ny departemanta dia napetraka ho eo ambany fiahian'ny Ministeran'ny Atitany, ary miandraikitra ny fanasokajiana ny olom-pirenena ao Amoron'i Jordàna hiavaka amin'ny olom-pirenena Jordaniana. Manjavozavo ny fanaovany izany, ary nampisaraka fianakaviana maro. Olom-pirenena Jordaniana an'arivony no tsy manana ny laharam-pamantarana azy ireo, ary namoahana pasipaoro vonjimaika ho solon'izany.
Karapanondron'i Ahmad Said, Palestiniana mpitsoaponenana. Sary: mickyx09 (CC BY 2.0) avy amin'ny Wikimedia Commond
Noho izany, raha maro amintsika Jordaniana-Palestiniana no tia ny firenena izay nahabe antsika, Jordania kosa tsy voatery ho tia antsika. Mitety io maha-izy ny tena sarotakarina io isika, toy ny mandeha ambony vainafo mahamay, mirehitra na aiza na aiza toerana aleha.
Ny maha-Palestiniana any Jordania dia sahala amin'ny miatrika fanavakavahana mitohy. Efa fantatra fa raha iraisana amin'ny fikambanana ny zavabitanao, ny fahelemenao kosa dia fanananao manokana. Satria ianao Palestiniana dia tsy tena mpikambana ianao, nefa tsy manana toerana hafa aleha ianao satria Jordaniana. Olom-pirenena tsy feno ianao ary mpitsoaponenana maharitra. Mandritra ny fankalazan'ny olona ireo Ekosey mpankafy baolina kitra mitondra sainam-pirenena Palestiniana eny an-kianja, sakanana izahay Jordaniana-Palestiniana tsy hahazo mitondra ny sainam-pirenena Palestiniana an-kalalahana ao amin'ny tany ivelomanay. Mankalaza ny maha-firenena anay manokana any ary voahilika rehefa mankalaza ny azy ny Jordaniana hafa — izay tokony ho anay ihany koa.
Fa tsy mahalala fomba hafa izahay afa-tsy ny fisiana amin'ny maha-izahay anay. Ny maha-Palestiniana dia toy ny hoe mahatsiaro ny toerana niavianay, ilay toerana izay tsy azonay iverenana. Ho anay ny maha-Palestiniana dia mikasika ny toerana izay nahalehibe anay, ireo namana sy fianakavianay, ary ny fiainana izay niarahantay nanorina teto.
Koa mamelà ahy àry raha mahatsiaro ho tsy mino aho manoloana ny fanindrahindrana nasionalista atao amin'i Ahmad Abughaush, indrindra moa fa vahoaka iray ihany no iavian'izany dia ireo izay maneso ny ekipa olaimpikan'ny Golfa avy amin'ny Golfa izay ‘mividy‘ atleta avy any amin'ny firenena hafa mba hilalao ho azy ireo. Rehefa dinihina tokoa, araka ny efa fantatry ny mpanohana klioba Wehdat misy ny mpitsoa-ponenana mpilalao baolina kitra, dia ampiasaina mandrakariva hamelezana anay ny maha-Palestiniana anay, ary koa ny tsy maha-tena teratany Jordaniana anay fa nampizakaina io zom-pirenena io, ary anoherana mandrakariva ilay maha-Jordaniana tsy feno sy mpanilikilika. Angamba mahafinaritra izany hoe afaka mamafa sy manova ny momba ny olona araka izay tianao.
Fantatry ny olona tahaka ahy fa ny maha-Palestiniana sy ny maha-Jordaniana dia tsy zavatra tsy mifanaraka, satria raha ny marina dia ireo roa ireo izahay. Noho ny safidy na noho ny zavatra ivelany, efa anisan'ity firenena ity hatrany am-boalohany izahay, niasa mafy, toy ny Jordaniana rehetra mba hahatonga azy eo amin'ny toerana misy azy amin'izao fotoana izao. Mahatoky ny Maha-Jordaniana izahay, izay mampiditra anay sy manome hery ny tolona ataonay hoan'ny fanafaham-pirenena, fa tsy ilay mamafa anay. Tsy rariny raha voatery manafina ny maha-Palestiniana anay izahay mba hanompo fandaharanasa iray izay manilikilika anay.
Rehefa mahomby ny Jordaniana-Palestiniana, tianay ny ho afaka hankalaza ny maha-izahay anay iray manontolo, ary ambonin'ny zavatra rehetra, ny tantaranay. Izany dia manomboka amin'ny fankalazana an'i Abughaush Ahmad, ilay Jordaniana-Palestiniana, izay niady ny làlany hatreny an-tampon'ny lampihazo.